သင်၏ GNU / Linux ကို Digital Mining အတွက်သင့်လျော်သော Operating System တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ Linux မှ
သင်၏ GNU / Linux ကို Digital Mining အတွက်သင့်လျော်သော Operating System တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ
ဤဒုတိယလ၏ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေမှုတွင်သင့်အားအနည်းဆုံးအကြံပြုထားသောအထုပ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် GNU / Linux စနစ်ရှိသင့်သည်၊ ၎င်းကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်၊ တနည်းအားဖြင့် Cryptocurrencies မျိုးဆက်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း (Cryptocurrencies) ကိုအပ်နှံနိုင်သည့်ထုတ်ဝေမှုကိုငါပေးမည်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် GNU / Linux Operating System ၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မူကွဲပေါ် မူတည်၍ တိကျစွာအတူတူမဖြစ်နိုင်သည့် package အချို့နှင့် command command များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သောသူတို့၏အမည်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လိမ့်မည် -
1.1 Kernel ကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပါ
1.4 ဗွီဒီယိုကဒ်များကိုစီမံရန်အထုပ်များ -
1.4.1 Nvidia ကဒ်များ
1.4.2 AMD ကဒ်များ
1.4.3 INTEL ကဒ်များ
1.5 PYTHON-based applications များစီမံခြင်းအတွက်အထုပ်များ:
1.6 QT5-based applications များကိုစီမံခြင်းအတွက်အထုပ်များ:
1.7 Cryptocurrency Miners (Miners) နှင့် Wallets Programs များစီမံခြင်းအတွက်အထုပ်များ -
1.8 MinerOS / MilagrOS - ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း
root @ machine: / directory / subdirectory # sudo apt install-essenzjali linux-header - $ (uname -r) dkms
root @ host: / directory / subdirectory # sudo apt install arj bzip2 lhasa lzip p7zip p7zip-full
root @ computer: / directory / subdirectory # sudo apt install acpi acpitool acpi-support fancontrol hardinfo hwdata hwinfo ibus ibus-m17n inxi irqbalance iucode-tool ကိုလက်တော့ပ် - detect linux-firmware lm-sensors lshw lsscsi စမတ် - notifier smartmontools sysinfo xsens
root @ host: / directory / subdirectory # sudo apt သည် intel-microcode # ကိုသာ INTEL ပရိုဆက်ဆာများအတွက်ထည့်သွင်းပါ
root @ machine: / directory / subdirectory # sudo apt install amd64-microcode # AMD ပရိုဆက်ဆာများအတွက်သာ
ထိုအခါ command ကို execute:
ရွေးချယ်မှုအားလုံးတွင် ENTER ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် command command ကို execute:
အသုံးပြုသူအနေဖြင့် hddtemp command ကိုစမ်းသပ်ပါ။
မှတ်စု: ဗွီဒီယိုပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်များကိုတင်ပြသော AGP / PCI / PCI EXPRESS ဗွီဒီယိုကဒ်သို့မဟုတ်လက်တော့ကွန်ပျူတာများ (လက်တော့ပ်များ) ပါသည့် desktop ကွန်ပျူတာများတွင်သာတပ်ဆင်ပါ။
root @ host: / directory / subdirectory # sudo apt ထည့်သွင်းပါ။ linux-headers-`uname -r` xorg-server-source
root @ machine: / directory / subdirectory # sudo apt ထည့်သွင်းပါ။ nvidia-kernel-common nvidia-kernel-dkms nvidia-xconfig
System ကို Restart လုပ်ပြီးရလဒ်ကိုစမ်းသပ်ပါ။
root @ machine: / directory / subdirectory # sudo apt သည် fglrx-driver fglrx-control ကိုသွင်းပါ
root @ machine: / directory / subdirectory # sudo apt သည် intel-gpu-tools i965-va-driver ကိုထည့်သွင်းပါ။
မှတ်ချက် စီးပွားဖြစ်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များကိုတပ်ဆင်ပြီးဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမစတင်ပါနှင့်သို့မဟုတ်ဖိုင်၏မာတိကာကိုဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ပြtheနာကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်သည် /etc/x11/xorg.conf နှင့် rebooting ။
PYTHON-based applications များစီမံခြင်းအတွက်အထုပ်များ:
sudo apt သည် python-pip python-psutil ကို install လုပ်သည်
QT5-based applications များကိုစီမံခြင်းအတွက်အထုပ်များ:
sudo apt ကို install လုပ်ပါ qt5-default qt5-qmake qtbase5-dev-tools qttools5-dev-tools libqt5websockets5
နှင့်သင်၏ Operating System ၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မူကွဲပေါ် မူတည်၍ -
sudo apt libqt5core5 ကိုထည့်သွင်းပါ
sudo apt သည် libqt5core5a ကိုထည့်သွင်းပါ
Cryptocurrency Miners (Miners) နှင့် Wallets Programs များစီမံခြင်းအတွက်အထုပ်များ -
sudo apt သည် autoconf ကိုအလိုအလျောက် install လုပ်ခြင်း autotools-dev build-essential byobu g ++ gcc gcc-6 g ++ -6git git-core libboost-dev libboost-all-dev libcrypto ++ - lib libcurl3 libdb-dev libdb ++ - dev libevent-dev libgmp-dev libgmp3- dev libhwloc-dev libjansson-dev libmicrohttpd-dev libminiupnpc-dev libncurses5-dev libprotobuf-dev libqrencode-dev libqt5gui5 libqtcore4 libqt5dbus5 libstdc ++6libssl-dev libusb-1.0-0-devc ဖွင့်လှစ် libt-libc dev openssl pkg-config protobuf-compiler qrencode qttools5-dev qttools5-dev-tools
sudo apt သည် libdb ++ ကို install လုပ်ပါ - dev libdb5.3 ++ libdb5.3 ++ - dev
sudo apt သည် libdb ++ ကို install လုပ်ပါ - dev libdb4.8 ++
မှတ်ချက် - စာကြည့်တိုက် ၄.၈ ခုအတွက်သင်ထည့်သွင်းနိုင်သည် Bitcoin repositories ကို bitcoin / bitcoin: အ ppa ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်
Ubuntu ရော Ubuntu အခြေပြု Distros အချို့ပါလိုအပ်လိမ့်မည် libboost စာကြည့်တိုက်များကိုတပ်ဆင်ပါ ၎င်း၏ဗားရှင်းနှင့်မကိုက်ညီပါက - «libboost-filesystem1.58.0«, «libboost-program ကို-options1.58.0«, «libboost-system1.58.0 ဖြစ်သည်»ပြီးတော့«libboost-thread1.58.0»၎င်းသည် Ubuntu 16.04 (Xenial) ၏ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို command order ဖြင့် download လုပ်၍ ထည့်သွင်းရမည်။ "Sudo dpkg -i libboost * .deb" ။
နှင့်အခြားကိစ္စရပ်များတွင်, "cmake" သို့မဟုတ် "libcurl4" နှင့် "libcurl4-openssl-dev" package များကိုတပ်ဆင်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။, အရာစာကြည့်တိုက် uninstall လုပ်ဖို့လိုအပ်သည် "Libcurl3" နှင့်အသုံးပြုသောသူတို့အား applications များ။ Terminal (console) မှတစ်ဆင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများအတွက်နောက်ထပ်အသုံးဝင်သောအထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည် «ဖန်သားပြင်»။ သင်လိုအပ်သည်ဟုယူဆလျှင်၎င်းကိုထည့်သွင်းပါ။
ပြီးတဲ့နောက်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်ပြီးဆုံးနိုင်သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် optimization များအတွက်ပညတ်တော်မူ၏ operating system တစ်ခုလုံး၏
root @ host: / directory / subdirectory # sudo apt update; sudo update-apt-xapian-index; sudo aptitude လုံခြုံစွာအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ sudo apt ထည့်သွင်းထားသည်။ sudo dpkg --configure -a; sudo apt - ပုံသေပြတ်သားသောသွင်းသွင်းခြင်း
root @ host: / directory / subdirectory # sudo localepurge; sudo update-grub; sudo update-grub2; သန့်ရှင်းသော Sudo တတ်လွယ်ခြင်း; sudo aptitude autoclean; sudo apt-get autoremove; sudo apt autoremove; sudo apt ရှင်းလင်းခြင်း၊ sudo apt ဖယ်ရှားပါ
root @ machine: / directory / subdirectory # sudo rm -f /var/log/*.old /var/log/*.gz / var / log / apt / * / var / log / auth * / var / log / daemon * / var / log / debug * / var / log / dmesg * / var / log / dpkg * / var / log / kern * / var / log / messages * * var / log / syslog * / var / log / user * / var / log / Xorg *
သင်ယခုလုပ်နိုင်သည် သတ္တုတွင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုချင်းစီကို ဆက်၍ ဆက်၍ ဆက်၍ ဆက်၍ ဆက်၍ ဆက်၍ ဆက်လုပ်သွားရန် သင်၏အကြိုက်ဆုံး
MinerOS / MilagrOS - ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း
ဒါတွေကိုမျှော်လင့်ပါတယ် နည်းနည်းအကြံပေးချက်များ ၄ င်းတို့ကို Distro နှင့် version တွင်လမ်းညွှန်ပြီး၎င်းကို၎င်းကို Cryptocurrencies ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းမှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤနှင့်အခြားတိုးတက်မှုများကိုမပြုလုပ်လိုပါကအခမဲ့သို့မဟုတ်လှူဒါန်းမှုအောက်တွင် download လုပ်ပါ GNU / Linux MilagrOS လည်ပတ်ရေးစနစ်ယခင်ကခေါ်တော်မူ မိုင်းလုပ်သားများ ဒီနေရာကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ Tic Tac စီမံကိန်း | ဖြူ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » သင်၏ GNU / Linux ကို Digital Mining အတွက်သင့်လျော်သော Operating System တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ
တစ် ဦး trolls တူ၏အန္တရာယ်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာနှင့်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများစွာဖြင့်လုံလောက်စွာအားသွင်းနေပြီးအရာဝတ္ထုများကိုအကန့်အသတ်မရှိစွမ်းအင်ထုတ်ပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြnumbersနာကိုဖြေရှင်းသည့်နံပါတ်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကွမ်တမ်ကွန်ပျူတာဖြင့်ထွက်လာသောအခါလတ်ဆတ်သောလေကိုယူနိုင်သည် ဒါဟာစိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံရသည်။ ဒါကိုအားမပေးသင့်ဘူး။
Troll လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ... ငါနင့်ကိုလုံးဝသဘောတူတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူသိနည်းတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလောက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိမသိဘူး။ https://www.gridcoin.us/
အချို့သော cryptocurrencies အတွက် (သိပ္ပံနည်းကျနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် codes တွေကို) အများကြီးကောင်းသောအရာတို့ကိုရှိပါက။ ဒဏ္ာရီတွင်မိုင်းလုပ်သားများမှရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသော cryptographic codes များစွာသည် cryptocurrencies နှင့်အတူဆုလာဘ်များရရှိနိုင်သည့်အတွက်အနာဂတ်အနာဂတ်အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုကမ္ဘာ့အဆင့်တွင်ဖြန့်ဝေသည့်ကွန်ပျူတာများမှတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။
Muahahaha …အဲဒါ Machiavellian အေးမယ်
သင်လုံးဝမှန်ပါသည်၊ သို့သော်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မှာသဘာဝအတိုင်းဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ အကြောင်းမှာဆန့်ကျင်ဘက်သည်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ပိုကောင်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သောကြောင့်ဒီဂျစ်တယ်သတ္တုတူးဖော်ရေးသည်စနစ်အတွင်းဖက်ရှင်အသစ်ကိုတစ်စုံတစ်ရာမောင်းနှင်သည်အထိဤတွင်ရှိနေသည်။ ! ပြီးတော့ငါ GNU / Linux ကိုသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ပဲသင်ယူရတာပေါ့။
ASIC miners များအတွက် (ကျွန်ုပ်တွင် Antminer s9 ရှိသည်) သင်သည် Desktop နှင့် cgminer အထုပ်မပါဘဲနောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောနောက်ဆုံးပေါ် Debian ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ပိုက်ဆံအိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် Bitcoin core (Bitcoin-qt) ကို သုံး၍ console မှ (CLI) မှယင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကောင်းပြီ၊ ဤဆောင်းပါးသည်၎င်းတို့၏ GNU / Linux ကိုသူတို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လည်ပတ်နေပြီးသတ္တုတူးဖော်ရေးကိုစတင်လိုသူများနှင့်သူတို့၏လက်ရှိ Operating System ကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သူများအတွက်ပိုသည်။
သတ္တုတူးဖော်ရေးဆိုတာဘာလဲ ငါက cryptocurrency ဖန်တီးဖန်တီးငါသိ၏, ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းများအတွက်ဘယ်လိုလုပ်သလဲ?
ရပါတယ်! ဒါဟာအသိပညာနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့် socialize နှင့်ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရန်အပျြောအပါးပါပဲ!
သင်က Bitcoin တစ်ခုမှဘယ်လောက်ကြာကြာ ၀ င်ငွေရနိုင်မလဲ။ ငါနားလည်သည့်အတိုင်းတစ်နှစ်အတွင်းရရှိသောအရာသည် Raspberry ၏ကုန်ကျစရိတ်ပင်မဟုတ်သောကြောင့်သတ္တုတွင်းတူးဖော်သူများသည်ယနေ့အထိအမြတ်အစွန်းမရကြပါ။
Gabriel Simon သို့ပြန်သွားပါ
သင်တစ် ဦး PC ကိုဝယ်ခြင်းနှင့်သတ္တုတွင်းဆင်းအရည်ပျော်လျှင်သင်ဆက်ဆက်အများကြီးမပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ကသင်ယူနိုင်ပြီးနည်းပညာဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေးလှိုင်းထဲကထွက်မလာနိူင်ဘူး။ Crypto and Tradeas အပိုင်းအစအနည်းငယ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းအနိုင်ရနိုင်တယ်၊ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ 🙂
ယုတ္တိရှိသော်လည်းပထမဆုံးထင်မြင်ချက်တွင်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သော်လည်းလူများမသိသောအချက်မှာအစွမ်းထက်သောအခြားနည်းလမ်းများရှိပြီးဖြစ်သည်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်, အဘယ်ကြောင့်ဒီအလူသိများသည်ကိုမသိရပါဘူး ..
ကောင်းပြီအဖြေတိုတယ်။ အလွန်ရှုပ်ထွေးတယ်။ လူများမရှိသောအနည်းဆုံးလိုအပ်သောဗဟုသုတနှင့်အမြတ်ရလိုသောလူများဖြစ်သောဘုံပိုင်းခြေကိုကျွန်ုပ်ပြောပါသည်။ မလိုချင်ဘူး အကြောင်းပြချက်မှာဤရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်များ၊ ASIC များနှင့်စမ်းသပ်မှုအဆင့်များ၌စက်ကိရိယာများနှင့်အခြား AI နည်းပညာများအခြေခံသောအခြားစက်ပစ္စည်းများရှိခြင်းဖြစ်သည်။
အမြတ်အစွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသူဂါဗြေလအတွက်ဤအတိုကောက်က -
ဂါဗြေလ, ဒီအဖြေကိုနည်းနည်းလှည်သည်။ အဘယ်ကြောင့်?
၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သင့်နိုင်ငံ၏စည်းမျဉ်းများ (ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည့်အခွန်အခများစတင်နေသောကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံ၏ဥပဒေများနှင့်အညီ) ကဲ့သို့သောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လျှပ်စစ်၊ အင်တာနက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်သင်ရွေးချယ်ရန်ငွေကြေး။
Bitcoin တူးဖော်ခြင်းသည်သင်၏စွမ်းအားအပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ စွမ်းအားများလေ၊ အမှန်တကယ်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိလေဖြစ်သည်။ Bitcoin တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စက်များနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်သင် Bitcoin ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်ပြီးအခြားတစ်ခုကိုလည်းထုတ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအခက်အခဲကနေ့တိုင်းကြီးထွားလာတယ်။ ယခုသင်သည်အခြားငွေကြေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကအခြေအနေများစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သငျသညျတူးဖော် GPU ကိုရွေးချယ်ပါ။ သော်လည်း။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အတူတူပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ရလဒ်ပိုပြီးအမြတ်အစွန်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သော monero အဖြစ်ငွေကြေးများ (နှင့်မကြာသေးမီက bytecoin လည်းခဲ့သည်) တန်ဖိုးကိုအတွက်ခိုင်မာအောင်နှင့်တိုးမြှင့်နေကြသည်။
သင့်အနေဖြင့်နယ်ပယ်မျိုးစုံ၊ နည်းပညာ၊ စာရင်းအင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကုန်သွယ်ခြင်း) ကိုသိသင့်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ငါအကြံပြုသောအချက်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ တိုတိုပြောရမယ်ဆိုရင်မှားသွားမှာကိုကြောက်စရာမလိုဘဲမကြာခင်မှာငါတို့တွေ ၀ ယ်မလာရင် Bitcoin နဲ့ cryptocurrencies ကိုသုံးခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။
ဘယ်နေရာမှာရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ program ကိုဘယ်လို run ရမလဲ
အကယ်၍ မင်း MinerOS ကိုဆိုလိုသည်ဆိုလျှင်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ https://proyectotictac.wordpress.com/mineros-un-gnu-linux-listo-para-minar/
ဒီစာမျက်နှာကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် VPS ကို configure လုပ်နိုင်တယ် Windows အကူအညီ
Rabato Carrefour ဟုသူကပြောသည်
Rabato carrefour အားစာပြန်ပါ
Rabato ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်၏ React ပရောဂျက်များကို Reactotron ဖြင့်စစ်ဆေးပါ